फिजी भिसा - ALinks
के तपाईलाई फिजी यात्रा गर्न भिसा चाहिन्छ?
जबसम्म तिनीहरू 109 भिसा-मुक्त देशहरू मध्ये एकबाट आउँदैनन्, फिजीका आगन्तुकहरूले फिजीका कूटनीतिक नियोगहरू मध्ये कुनै एकबाट भिसा प्राप्त गर्नुपर्छ। सबै आगन्तुकहरूसँग कम्तिमा छ महिनाको लागि वैध राहदानी हुनुपर्छ।
फिजीका लागि कुन देशहरूलाई भिसा चाहिन्छ?
तपाईंले फिजीको लागि प्याकिङ सुरु गर्नु अघि तपाईंले पहिले भिसा आवश्यक छ वा छैन भनेर निर्धारण गर्नुपर्छ। 107 देश र अधिकार क्षेत्रका नागरिकहरूले फिजी भ्रमण गर्न भिसा प्राप्त गर्न आवश्यक छैन। आगमनमा भिसा, साथै इलेक्ट्रोनिक भिसाहरू उपलब्ध छैनन्। नतिजाको रूपमा, सबै गैर-भिसा-मुक्त राष्ट्रियताहरूले नजिकको फिजी दूतावासको भ्रमण गर्नुपर्छ र व्यक्तिगत रूपमा आवेदन गर्नुपर्छ।
म फिजीको लागि पर्यटक भिसा कसरी प्राप्त गर्न सक्छु?
फिजी को लागि पर्यटक भिसा
1 भिसा आवेदन फारम, पूरा र हस्ताक्षर।
कम्तिमा ६ महिनाको वैधता बाँकी रहेको वैध राहदानी। सबै आवेदन फारमहरू कम्प्युटरमा भर्नुपर्छ।
1 भरिएको र हस्ताक्षर गरिएको आवेदन फारम
3 भर्खरको राहदानी-शैली फोटोहरू, जसमध्ये एउटा नोटरी गरिएको हुनुपर्छ
नियोजित बसाइको अवधिको लागि आर्थिक सहयोगको प्रमाण
पुलिस रिपोर्ट वा असल आचरणको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दछ।
फिर्ता वा अगाडि टिकटहरू, वा पुष्टि गरिएको यात्रा कार्यक्रम।
फिजी मा व्यापार को लागी भिसा
प्रहरी रिपोर्ट वा असल आचरणको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहोस्।
फिर्ता वा अगाडि टिकटहरू, वा पुष्टि गरिएको यात्रा कार्यक्रम
यदि तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्ने विदेशी हुनुहुन्छ भने, आफ्नो ग्रीन कार्डको प्रतिलिपि ल्याउनुहोस्।
भ्रमणको उद्देश्य र अवधि, साथै सबै यात्रा खर्चहरूको लागि आवेदकको जिम्मेवारी उल्लेख गर्ने व्यापारिक पत्र।
फिजियन होस्ट कम्पनीबाट आधिकारिक निमन्त्रणा पत्र
फिजी भिसा कति छ?
तपाईंले आफ्नो फिजी भिसा आवेदनको भागको रूपमा शुल्क तिर्न आवश्यक हुनेछ। शुल्क तपाईंले आवेदन गरिरहनुभएको भिसाको प्रकारद्वारा मात्र निर्धारण गरिन्छ:
तपाईंले तिर्नै पर्छ $ 91.00 यदि तपाइँ एकल प्रवेश भिसाको लागि आवेदन गर्दै हुनुहुन्छ भने।
यदि तपाईं एकल प्रवेश भिसाको लागि आवेदन दिन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले तिर्नुपर्नेछ $ 180.00।
फिजी भ्रमण गर्न भिसा आवश्यक पर्ने देशहरू
बोत्सवाना, घाना, केन्या, लेसोथो, मलावी, नाइजेरिया, सियरा लियोन, दक्षिण अफ्रिका, स्वाजिल्याण्ड, तान्जानिया, द गाम्बिया, ट्युनिसिया, युगान्डा, जाम्बिया र जिम्बाब्वे फिजी अफ्रिका भ्रमण गर्न भिसा आवश्यक पर्दैन।
एसियामा बंगलादेश, ब्रुनाई दारुसलाम, चीन, हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (SAR), भारत, इन्डोनेसिया, जापान, मलेसिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाइल्याण्ड र फिलिपिन्स छन्।
एन्टिगुआ र बार्बुडा, अर्जेन्टिना, बहामास, बार्बाडोस, ब्राजिल, बेलीज, बर्मुडा, क्यानडा, चिली, कोलम्बिया, कमनवेल्थ डोमिनिका, ग्रेनाडा, जमैका, मेक्सिको, पाराग्वे, पेरु, सेन्ट किट्स र नेभिस, सेन्ट लुसिया, सेन्ट भिन्सेन्ट र द ग्रेनाडाइन्स, त्रिनिदाद र टोबागो, संयुक्त राज्य अमेरिका, उरुग्वे, भेनेजुएला
युरोप: अस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गेरिया, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, इस्टोनिया, ग्रीस, आइसल्याण्ड, जर्मनी, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, होली सी (भ्याटिकन), हंगेरी, इटाली, लाटभिया, लिकटेन्स्टाइन, लक्समबर्ग, मोल्डोभा, नर्वे, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, रोमानिया , रूस, सर्बिया, स्लोभाक गणतन्त्र, स्लोभेनिया, स्पेन, स्वीडेन, स्विजरल्याण्ड, युक्रेन।
सिरियालीहरुको लागी कतार मा रोजगारी को अवसर
बंगलोरमा रोजगार कसरी पाउने?
रूस को लागी भिसा मुक्त देशहरु
क्यानाडामा सबै स्थानहरू भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ? त्यसो भए क्यानाडाको लागि कति खर्च लाग्छ?
अष्ट्रिया मा यातायात प्रणाली।